पाँचदलीय गठबन्धनले एमालेलाई उछिन्छ: आचार्य, पोखरा महानगर प्रमुखका प्रत्यासी – Himalaya Times ।। One of the leading Newspaper in Nepal is Himalaya times. The online portal of ehimalayatimes.com
पाँचदलीय गठबन्धनले एमालेलाई उछिन्छ: आचार्य, पोखरा महानगर प्रमुखका प्रत्यासी
१६ बैशाख २०७९, शुक्रबार १५:३४
पोखरा । देशको ६ वटा महानगरपालिकामध्ये पोखरा महानगरपालिका चर्चामा छ। गण्डकी प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको यो महानगरपालिकामा पाँचदलीय गठबन्धनको तर्फबाट धनराज आचार्य प्रमुख पदका उम्मेदवार हुनु हुन्छ । उहाँ गठबन्धनको एउटा दल एकीकृत समाजवादीका नेता हुनु हो ।
उहाँले बिहीबार संयुक्त चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुभएको छ। उनै अचार्यसँग सार्वजनिक भएको घोषणापत्र, गठबन्धनको पोखरामा स्थितिलगायतबारे केन्द्रित भएर न्युज कारखानाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश
जित्छु । नजित्नु पर्ने के नै छ र रु म त पाँच दलको साझा उम्मेदवार हुँ । म प्रमुख पदको उम्मेदवार छु । उपप्रमुखमा नेपाली कांग्रेसकी कोपिला रानाभाटजी हुनुहुन्छ । हाम्राविरुद्ध कोही पनि बागी छैनन् ।
महानगरमा यसअघि पनि थुप्रै योजना नबनेका होइनन् । गुरुयोजना पनि बनेका छन् तर ती कार्यान्वयनमा गएको देखिएन । यस हिसाबले हामी सम्मुनत पोखरा बनाउन प्राथमिकता तोकेरै पहिलो तीन महिनाका के काम गर्छौं रु ६ महिनामा के गर्छौं रु त्यस्तै, एक वर्षमा, दुई वर्षमा हुँदै पाँच वर्षमा के-के गर्न सक्छौं ? स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेका छौं । र, यो पोखरालाई सिंगो रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने ‘सिग्नेचर प्रोजेक्ट’ पनि घोषणापत्रमा राखेका छौं ।
घोषणापत्रमा भनिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छ रु मतदाता त नेताहरूले मत माग्दा ‘गर्छु’ भन्छन्, पछि ‘गर्दैनन्’ भन्छन् नि ?
बजेट पास भए लगत्तै